Wargeyska Daily Mail Ee Dalka Ingiriiska Oo Warbixin Dhinacyo Badan Taabaneysa Ka Qoray Sida Jaadka UK Loo Soo Geliyo » | Salaan Media
Wargeyska Daily Mail Ee Dalka Ingiriiska Oo Warbixin Dhinacyo Badan Taabaneysa Ka Qoray Sida Jaadka UK Loo Soo Geliyo »
July 12,2013 London(SM) – Wargeyska Daily Mail ee kasoo baxa wadanka Ingiriiska ayaa warbixin ka diyaariyay sida Jaadka lagu geeyo wadanka Ingiriiska oo looga qaado dalka Kenya oo uu ka baxo. Dawlada Ingiriiskaa dhawaan waxay dalkeeda ka mamnuucday in qaad ama jaad la galiyo oo lagu dhex ganacsado kadib markii ay u aqoonsatay inuu maandooriye yahay.
Sanado badan ayaa Ingiriiska si joogto loo geynayay Qaad fara badan oo laga qaaday wadanka Kenya taasoo ay dad badan oo la sheegay inay u badan yihiin Soomaalida England degen inay Cunaan. Dad badan ayaa isku hawla maalin walba guriska caleemaha jaadka waxaana marka ay habeeyaan ku duubaan caleemaha balbalaadhan ee muuska kadibna waxay ku sii ridaan kartoomo laga taxadaray waxaana meelaha lagu diyaaro ka mid ah Xaafadda Soomaalidu ay ku badan tahay ee Islii ee Nairobi sida ay warbixintu qortay. In ka badan 2,500 oo kartoon ayaa lagu qiyaasaa in la geeyo wadanka Ingiriiska 4 jeer todobaadkii ka hor intii aanay dawladu amar kasoo saarin mamnuucideeda.
Afartii cisho ee kasta Ingiriiska waxaa loo dhoofiyaa kumanaan sanduuq oo Jaad ku jiro dadka ugu badan ee loo dirana waa ganacsato Soomaali ah.
Horey waxaa jaadka looga mamnuucay dhawr wadan oo Maraykanka iyo wadamo reer Yurub ah ku jiraan haddase dawlada Britain ayaa ku biirtay oo dalkeeda u diiday sida ay dhawaan xaqiijiysay Theresa May oo ah Xog’hayaha Arrimaha Gudaha Ingiriiska Theresa May waxaa ay shaacisay inay jaadka u aqoonsadeen inuu maandooriye yahay waliba uu ku jiro heerka Sadexaad ee ‘C’ la yidhaahdo.
Booliska Ingiriisku hadda kadib jaadka waxay u raadin doonaan oo ay ula dagaalami doonaan sida argagixisada oo kale sida laga soo xigtay waaxda arrimaha gudaha Ingiriiska.
Jaadka ayaa maalin walba la geeya suuqyada Islii kadib marka laga raro beeraha uu ka baxo ee Magaalada Meru la yiraahdo oo qiyaastii 140-mile u jirta Magaalada Nairobi halkaas oo lagu sii kala shaandheeyo kadibna dhawr wadan loo kala diro waana ganacsi lacag badan laga tabci karo.
Xaafaddaan dadka Kenyanka ah waxay u yaqaanaan Muqdishada yar waxaana aad ugu badan dadka Soomaalida ah ee jaadka cuna ama qayila haddii si kale loo yidhaahdo.
Qof degaanka ah oo Kenyan ah oo la hadlay Wargeyska sheekadaan wax ka qoray ee Daily Mail ayaa yidhi. “Annigu halkaan ma dagani magaalada banaankeeda ayaan daganahay waxaan halkaan u imaadaan inaan qayilo oo aan dadka tuso in qofka Kenya u dhashay aanu xumayn oo uu yahay qof wanaagsan oo Soomaalida wax la wadaagaya” Halkii xidhmo ee jaadka nooca wanaagsan ah Ingiriiska waxaa lagaga iibiyaa £27 oo ah lacagta Ingiriiska oo u dhiganta 40 $ Maraykanka ah.
Kenya gudaheeda dadka ugu badan ee Jaadka ka ganacsada waa Soomaali hase ahaatee dad Kenyan ah ayaa uga shaqeeya kuwaasoo lacago aan badneyn ku qaata habeyntiisa. Golaha ka talo bixinta daroogada sida qaldan loo isticmaalo ee Ingiriiska ee magacooda loo soo gaabsho ACMD ayaa sheegay in sanadihii 2011 iyo 2012 dalka England la geeyay 2,500 oo ton oo qaad ah kaasi oo ku kacayay lacag dhan £13.8m waxaana dawlada uga soo baxay £2.8m oo canshuur ah.
Jaadka Kenya ka baxa waxaa sidoo kale loo qaadaa wadamo kale oo ku yaala Africa, Bariga dhexe iyo wadamo kale oo Carbeed oo aad looga cuno